ရုရှား နှင့် အမရိကန်တို့ ဆီးရီးယားကာ့ဒ်စစ်သွေးကြွများကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်မည်ဟုသော ကတိကဝတ်အား ပျက်ကွက်ခဲ့ဟု တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား - Xinhua News Agency
အန်ကာရာ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနှင့် အမေရိကန်တို့သည် ကာ့ဒ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် (YPG) စစ်သွေးကြွများအား ထိန်းချုပ်၍ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း နယ်စပ်နှင့်ဝေးရာသို့ ပို့ဆောင်မည်ပေးမည်ဟူသော ၎င်းတို့၏ ကတိအား ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် စွပ်စွဲလိုက်သည်။
“မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတွက် ရုရှားနဲ့ အမေရိကန်ဟာ သူတို့ပြောထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို မလိုက်နာတဲ့ အတွက် သူတို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခုတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ဒီဘက်မှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်’’ ဟု နီကာရာဂွေးနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အတူ ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mevlut Cavusoglu က သတင်းထောက်များအားပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ ကို ဒီဒေသကနေရှင်းပစ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘာမဆိုလုပ်မှာပါ’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်က ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း Tel Rifat မြို့မှ YPG စစ်သွေးကြွများ ပစ်လွှတ်လိုက်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တစ်စင်းကြောင့် တူရကီအထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ် ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု တူရကီအာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားရှိ YPG ထိန်းချုပ်ထားသောနယ်မြေမှပစ်လွှတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီး အမြောက်ဆံ ငါးခုသည် တောင်ပိုင်း Gaziantep ပြည်နယ် Karkamis ခရိုင်တွင်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီအား တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုမှာ ရိုးသားမှုမရှိကြောင်း ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမေရိကန်ကိုယ်တိုင် YPG အား လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း Cavusoglu က ဆိုသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တူရကီနယ်စပ်၏ တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၃၀အကွာရှိ YPG စစ်သွေးကြွများအား ထွက်ခွာပေးရန် အမေရိကန် ၊ရုရှားနှင့်အတူ တူရကီ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သီခြားသဘောတူညီချက်များအား Cavusoglu ကရည်ညွှန်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
ANKARA, Oct. 13 (Xinhua) — The Turkish foreign minister on Wednesday accused Russia and the United States of failing to keep their promises to hold the Kurdish People’s Protection Units (YPG) away from its border in northern Syria.
“Russia and the United States also bear the responsibility for the recent attacks because they didn’t keep their word. Now, these terrorists are here and ramping up the attacks,” Foreign Minister Mevlut Cavusoglu told reporters atapress conference with his Nicaraguan counterpart.